Indonesia in Focus: Aadanuhu ayaa laga badiyay iswaafajinta la dabiiciga ah.
Aadanuhu ayaa laga badiyay iswaafajinta la dabiiciga ah.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (378) (Qaybta saddex boqol iyo toddoba iyo sideed), Depok, West Java, Indonesia, September 30, 2015, 3:18 pm). Intii u dhaxaysay 1960 iyo 1970 tuulada shalay gallinkii dambe, oo tuulada imanaya dhulka lagu tacbay webiga shalay gallinkii dambe iyo weli cidlada. Ma badan oo dadku ku badan yahay, labada (hub Dayak) bugis deegaanka iyo muhaajiriinta ka Java. Si loo gaaro tuulada Niilka labadaba ka tuulada New ulu, Balikpapan inta badan dadka isticmaalaya doon yar (la qaadataan taki, a), iyo marka webiga mar kale hadda deg deg ah (ay sabab u tahay roob) ka dibna qaado maalmood oo kaliya ku yimid tuulada kheyraad ee webiga, hadda tuulada hore u ahaa si wadajir ah ula magaalada ka mid ah Balikpapan, iyo wadada helaan ahaa hore u sahlan, sidoo kale la afar drive wheel baabuurta iyo mootooyinka ah. Dadka deegaanka ayaa inta badan waa hub Dayak ayaa lagu maray in ay sii joogaan hoos tuulada kheyraad kheyraad lagu tacbay shalay gallinkii dambe. Tirada dadka ku nool ka beeraha beeraha, laakiin sababtoo ah xaaladaha ciidda in beeraleyda sida caadiga ah beeraha bariiska oo keliya baa la guran karaa sanadkiiba mar. Laakiin sida caadiga ah marka lagu daro bariiska sii kordhaya, beeraleyda sida caadiga ah labaan beeraha leh khudaarta, sida qajaar, babayga, hadhuudh iyo kasaafada. Sidaas, haddii sahayda keydka cuntada bariis dhammaaday, beeralayda leeyihiin kaydka cunto ku filan ee kasaafada, galayda ama goosashada hadhuudh abid laga helay kaynta, Waxa intaa dheer in miraha sida babayga iyo yaanyada dhex beeray, kaymaha weli jira dad badan oo durian iyo rambutan iyo tan (kaynta Duku). Inkasta oo ahayd suxuuntiisii, kalluunka iyo kooxda kale ee caadiga ah waa Muslimiin deerada ugaarsi (deerada) dadka Dayak wac brackish, halka dadka deegaanka Kaharingan Hindu, iyo animsme Christian ay u ugaadhsadaan deerada oo doofaarro ah. Dadka deegaanka badanaa ma u ugaadhsadaan lagu tukan jiray tiro badan oo ku deldesheen oo laan geed ku teedsan webiga ah. Taasi waa sababta marka xitaa haddii ay weheliyaan webiga waxaa jira dad badan lagu tukan jiray, dadka deegaanka dagan u Doomaha doon ka geysto in kheyraad oo aan la dhexgelin, waxaa la soo sheegay in dad badan ay ku dhinteen ee lagu duubo ama lagu tukan jiray kaasi oo waa ugaadhsadaha (askar) waxaa inta badan lagu toogtay madaxa abeesadii , Inkasta oo kalluunka biyaha saafiga ah waa mid aad u badan badbaadiyo in Webiga iyo xataa isha ku arki kartaa, sababta oo ah webiga waa cad yahay. Dadka deegaanka sida caadiga ah inta badan soo jiidato kalluunka, ama adigoo dabin kalluunka baasaboorka a (waxaan wici xawaash). Beeralayda ayaa markii ay ka hor bariis laga beerto, dhulka beeraha si caadi ah u furan by kaymaha gubanaya. Sababta oo ah haddii beeralayda dhulka cad by jaridda xushay (mindiyo la tuuro / baangado) laba hektar oo dhul beereed qaadataa bilo badan cusub ee abuuray laba hektar oo dhul beereed, halka markii gubay, oo keliya muddo hal toddobaad gudahiisa. Si kastaba ha ahaatee, ku cultivators deegaanka sidii hore u soo maray, ay gubi karaa kaynta kula aag waa la qiyaasi karo, haddii aad rabto in aad isticmaasho laba hektar, markaas hektar kaliya labo gubay, waxayna leeyihiin siyaabo in dabka kaynta ma faafin iyo meel walba ku faafay. Sidaas, wax ku ool ah nolosha qoyska ee beeraleyda, xitaa hub ah longhouses Dayak deggan yahay inta u dhaxaysa 3 ilaa 5 madaxdii reerahooda oo guri kaliya. Waxay cunto maalin kasta bariis (bariis / bariis) oo ay weheliyaan kalluunka, hilibka (matago) deerada, iyo noocyo kala duwan oo khudaar, sida caleemo kasaafada iyo qajaar. Si ay isu goostaan, iyo koraan sannadka oo dhan, talantaalli ah u dhexeeya, beergoosadka ka mid ah bariis, hadhuudh, kasaafada iyo sago, waxa kaliya lauknya isla sepnjang Makrell sano ama hilib deerada matago (deerada) ama hilibka doofaarka (dayak Christian / Hindu Kaharingan) Inta badan Dayak diinta Christian ama Hindu Kaharingan, laakiin gaar ahaan hub Dayak, sababta oo ah inta badan ku nool yihiin demisaan degmada xeebta, sida caadiga ah xeebta waxaa inta badan la xiriira guuraa ka soo jeedo bugis / Bajau (Sulawesi) ahaayeen Muslim, hub aad u badan Dayak raaco casharrada diinta ee bugis ah / Bajau this. Maxaa yeelay, cuntada aasaasiga ah (ka dhigtey) dadka laga helay duurka, iyo laga helay kaynta (sago), ka dibna dadka aan ka weynayd kuwa la sicir bararka iyo la ruxruxo ahaan u lisanka (lisanka) sameeyo agagaarka dadka deegaanka ee magaalada ka socda. Television Radio gaar ahaan, marka ma jiraan, si ay gebi ahaanba xog la'aan ka dunida ka baxsan / Waxaa jiray buuq lahayn ololaha doorashada Madaxtooyada, Gunernur, Maayarrada iyo regents, sidoo kale waxaa jira doorashooyin tuulada lahayn, oo waxaa aan loo magacaabay madaxa tuulada, kaliya horyaalka amiirkoodii buu madaxa tuulada / magaalada. La yaab ma laha marka aan dhammaan dadka deggan waxay leeyihiin kaarka aqoonsiga qaranka (KTP). Qaar badan oo Dayak noqday dhaggan diinta kiristaanka, maxaa yeelay, markaan u badan wadaad / wadaad ka Netherlands in badan soo galay kaynta xataa kuwa badan oo la aasaasay kaniisad kaynta. Nolosha dadka tuuladu ay ku wada noolaanshaha dabeecadda, maxaa yeelay, ay dabiicadda ayay soo goosan karaa natiijada waarta. Sannadkii 1970 ayaa, inkasta oo aabbahay ahaa askari, balse ay go'aansadeen in ay u guuraan guriga ka fuulaan sentosa ciidamada II Balikpapan, iyagoo ku dhisaya gurigooda xeebta ee Kampung Baru Central, Balikpapan, la fahmi karo aynu hore u sekelurga leeyihiin fariistay walaalaha lix qof (ampai, oo aabbahay wuxuu lahaa shantii wiil, shan gabdhood) haddii xisaabiyaa la dhicin saddex jeer, ka dibna hooyaday dhashay (leeyihiin carruur 13). Sidaas aabbahay inuu guri u dhiso stage weyn, oo berkedda weyn ka hooseeyey ka yar guriga waa marka hir). Sidaas WC / suuliga / musqul si degdeg ah suuroowdo badda. La fahmi karo marka ma jirto qorshaynta qoyska (KB), si carruurta oo dhan awoodo ay ka buuxaan raashiin bariis ka soo baxay xafiiska. Wakhtigan naga caruurnimada dadka deegaanka wada deegaanka waqtiyada firaaqada ah la qaataan berenamg iyo Doomaha doon yar oo xeebta midig ka dambeeya guriga. Our kalluumaysiga Kdang, iyo haysteen doontooda qabashada tiro badan yihiin xagga dambe ee guriga. Mararka oo dhan waxay la joogeen saaxiibada bulshkuleetiga doomo in ku dhawaad ​​estuaries Wayne iyo Wabiyaal shalay gallinkii dambe ee dhamaadka ah tuulo cusub, waxaa aan menjaing haysteen doontooda iyo noocyo kala duwan oo ah noocyada, oo ay ku jiraan aargoosato iyo østers mangrove (mangrove mulaca) in si balaadhan ayaa la heli karaa oo ku taalla daafaha kaymaha mangrove marka aan weli soo jiidaan xeebta Gacanka Balikpapan. Sannadkii 1990 markii aannu soo celiyo oo meeshan (dib qoyska u dhaqaaqay Jakarta horraantii 1973) oo kaliya in ay soo booqdaan qaraabadooda qoyska oo weli ku nool yihiin London, waxaan ka helay xeebta Balikpapan badanaa laga helaa qashinka oo caag ah iyo qashinka kale ee badan ku daateen ah. Suli sheegay in kalluumaysatada maxalliga ah waxaa laga heli lahaa noocyada wax badan oo ka mid ah kalluunka, carsaanyo, haley (lobster) iyo østers in mangrove xeebta Balikpapan, aan ka ahayn mangrove baabbi'iyeen, xeebaha xeebaha ahaa qashinka kala duwan tercenar. Waxa kale oo aanu heli waayeen mar orangutans Daulu badan geedihii ka soo laalaadeen weheliyaan ka hooseeya si ay u dagin, oo ay ku jiraan lagu tukan jiray ee ay adag tahay in la helo. Orang-utan aan weli waxaa laga heli karaa maxaabiis ahaan utan orang in lagu tacbay webiga hayo hey'ad oo maamusha utan Orang ee. Hadda jasiiradda Borneo yihiin cidlada mar dambe inta badan la isticmaalay, hadda htannya badan oo gubay in la bedelo shaqada la xoqayaa in saliid oo timir ah, iyo socodka biyaha webiga ayaa waxaa sii yaraanaya, sababta oo ah geedaha shaqada si uu u nuugo biyaha roobka ka hor wuxuu la barwaaqaysan webiga oo waxay bilaabeen inay baaba'aan, nimadii dhaqaalaha aadanaha waa saliid beereed furan gubanaayo kaymaha, taasoo keentay in Indonesia ayaa haatan ku jira xaalad deg deg ah qiiqa Indonesian dhacdo dabka duurka kartaan Samai 1997 (BBC) Forest iyo dabka dhulka ee Indonesia ee 1997 ay gaareen malaayiin hektar. Baaxada iyo saamaynta dhaqaale ee dabka kaynta iyo dhulka ku sugan tiro gobollada ee Indonesia u badan tahay in ay isu barbar baaxadda dhacdo la mid ah in 1997, sida laga soo xigtay cilmi. Iyada oo la socodka, Robert Field qiimeeyo dhulka iyo kaynta dab ku dhuftay Indonesia sanadkan waa mid aad u daran. Field, cilmi-Columbia University ah oo ay fulisey waxbarashada ee machadka Goddard ee Space Studies Space Agency Maraykanka, xataa aaminsan in xaaladda ka jirta dalka Indonesia waxa uu noqon karaa mid dhib badan haddii ay abaartu sii oo sabab u ah ee arrin El Nino. "Xaaladda in Singapore iyo Sumatra waa waddada u dhowaanin qaybta koonfur bari ee 1997. Haddii xilli cimilada saadaalinayaa engegan sii jiro, waxa loo qaadan karaa in 2015 waxaa lagu diiwaangelin doonaa sida dhacdada ugu xun ee diiwaanka," ayuu yiri Fields sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee AFP leh. In muddo ah 1997-1998, dowladda Indonesia ayaa ku qiyaaseysa in la xaddido dhulka in aanu la kulmin dab ku gaareen 750,000 hektar. Si kastaba ha ahaatee, hay'adaha kala duwan ee deegaanka sida Forum ee deegaanka (WALHI) ku qiyaasnaa tirada gaaray 13 million hektar. Markaas ka baran Qorshaynta Hay'adda Horumarinta Qaranka wada dhaqmeen si la Bank Asia Development (ADB) ku qiyaastay in la xaddido dhulka uu saameeyey dab gaareen 9,75 milyan oo hektar. About saameynta dhaqaale, xaddiga qiyaasta kala duwan. Dhaqaalaha iyo Deegaanka Barnaamijka koonfur bari Asia Indonesia saadaaliyay US soo gaartay $ 5 billion ilaa $ 6 bilyan oo sabab u ah dabka dhulka iyo kaynta ee 1997-1998. Markaas, Bappenas iyo waxbarasho ADB diiwaan khasaare US $ 4,861, oo u dhiganta Rp711 trillion. Khasaaraha dhaqaale ee Indonesia ayaa sabab u ah dabka iyo qiiqa 1997 dhaxaysey $ 4 bilyan oo ah in $ 9 billion. Adkeysiga deegaanka Herry Purnomo, machadka cilmi-baarista Center for International Dhirta Research (CIFOR), ayaa sidoo kale ku dooday dab dhulka iyo kaynta sanadkan barbareeyay rikoorka 1997. "Arrintan oo ah El Nino sanadkan wax yar yar marka la barbar dhigo 1997. Si kastaba ha ahaatee, adkaysiga lafaguro naga nugul dabka kaynta sababtoo ah waxaan soo Dullaysane by xoqayaa in warshadaha iyo saliid oo timir ah," ayuu yiri Herrera u sheegay BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Herrera ma meesha ka saaro suurtogalnimada in saamaynta dhaqaale ee dabka kaynta iyo dhulka sanadkan dhigma laga yaabaa inuu rikoorka 1997. "Gobolka gaartay kaliya Rp20 trillion sabab u ah dabka kartaan. Waa hagaag, hadda waxaa jira ugu yaraan shan gobolladiisa oo ay saameeyeen daran, kuwaas oo Riau, Jambi, South Sumatra, West Kalimantan, iyo Central Kalimantan, "ayuu yiri Herrera. Wuxu sheegay, in qiimaha khasaaro aan la keliya xisaabiyaa kaliya dabka qoryo maqan. "Waxaa jira ayaa la carqaladeeyey dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha, kaas oo ay saamaysay caafimaadka dadweynaha, biyo burburay, gaadiidka, iyo kuwo kale," ayuu yiri Herrera. Wareysi uu siiyay BBC Indonesia, Head of Data Information iyo Public Relations of National Hay'ada Maareynta Musiibooyinka (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, ayaa sheegay in saameynta dhaqaale ee musiibada ciiryaamada ka dhacay gobollada dhowr Indonesia ee 2015 ka badan ayaa laga yaabaa 20 trillion. Tirada Taasi, ayuu yiri, oo ku salaysan xogta ee sannadkii hore. Waxaa shaaca ka qaaday in khasaare ay sabab u sheegan karo in 2014, xisaabiyaa saddexdii bilood ka February si ay u April oo keliya gobol Riau ka gaareen Rp20 trillion. Saddex gobolladiisa dhigay qabashada xaaladda degdegga ah ugu dhaqso badan Dababka Land iyo kaynta oo keeni ciiryaamada uu noqday dhacdo si joogto ah sanadlaha ah. Dowladda Indonesia ku adkeystay ma aqbali doono gargaar bixiyeen laba dalalka deriska ah, Singapore iyo Malaysia, taas oo sanado badan ayaa sidoo kale saameyn ku ciiryaamada ka dababka kaynta iyo dalka Indonesia. Wareysi BBC la, Madaxweynaha Joko Widodo sheegay Indonesia ayaa dadaal halis ah, iyada oo ciidamo kumanaan ka tirsan ciidamada iyo booliska iyo sidoo kale daraasiin helicopters in ay ka gudbaan. Madaxweynaha Joko Widodo ayaa sheegay in u baahan tahay saddex sano si ay u dhamaystiraan shaqada jirka si ay u joojiyaan ciiro ah. "Waxa ay ka dhigan tahay aan la ururiyaa si loogu xamili oo dhan oo iyaga ka mid, laakiin tani waxay qaadataa waqti. Waxaan la qiyaaso saddexdii sano ee shaqada jirka sameeyo, "ayuu yiri Jokowi u sheegay BBC-da ee Karishma Vaswani. Iyadoo Wasiirka Dhirta iyo Deegaanka, Siti Nurbaya, sharax nooca gargaarka in Singapore ayaa si isku mid ah in Indonesia, ee helicopters Chinook bixiyaan, si ay u caawiyaan mugdiga. Laakiin tirada waa hal unug oo kaliya. Maxaa yeelay, dadka deegaanka si ay u booqdaan xarunta caafimaadka waa sare ku filan oo la xidhiidha cudurka mareenka sare iyo da'da halis sare u yihiin ilmaha yaryar, waxaan qaatay hall dowladda magaalada geeddiga. Helda Suryani "Wuxuu uun (Singapore) siiyo mid ka mid diyaarad, si haddii ngasihnya 20 xabbo oo kiniin ama 30," ayuu yiri Siti. State of xaaladaha degdegga ah Guud ahaan saddex gobol, kuwaas oo Riau, Jambi iyo Bartamaha Kalimantan ku soo rogtay xaalada degdegga ah ka dib markii toddobaad ee tilmaamayaasha wasaqowga hawada ee gobolka yada khatarta. On Wednesday, September 30th, pollutant tilmaame ee Pekanbaru, Riau Reliable xisaabinta Saadaasha hawada, Climatology, iyo Geofisika- gaaro 450 ama 100 ka badan heerka khatarta. Desi ahayd xaalad nasiib darro, hooyada ilmaha jir ah hal sano ah oo lagu daweeyay cisbitaal ku Pekanbaru, Riau, tan iyo xanuun ka haya sambabada. Cudurka ayaa waxaa sii xumeeyey by ciiro qaro weyn ayaa la gaaray bilihii la soo dhaafay. "Wiilkeyga ayaa ku guriga, ma meel ay sabab u tahay ciiryaamada. Weli xiriir la Caabuq ah. Waa maxay sababta ay dawladdu ma sameeyo wax? Waa maxay sababta ay sugaan ilaa caruurteena dhinto, maxaa yeelay, dhammaan qiiqa? "Waxa uu yiri. Chief Medical Officer of the City of Pekanbaru, Drg. Helda Suryani, ayaa sheegay in ay qaadeen talaabooyin kala duwan, oo ay ku jiraan bixinta hoolka dabaqa saddexaad ee dhismaha xafiis Duqa Pekanbaru sida goobaha geeddiga ah ee dhallaanka ilaa lix bilood. Hall ayaa hadda degan afar carruur ah, qof dumar ah oo uur leh, iyo saddex chaperones waalidka. Maalintii Arbacada (30/09), pollutant tilmaame in Pekanbaru, Riau ah, sida ay xisaabinta Saadaasha hawada, Climatology, iyo Geophysics gaaro 450 ama 100 ka badan heerka khatarta. "Sida muwaadiniinta booqasho uu ku tagay xarunta caafimaadka waa sare ku filan oo la xiriira cudurka mareenka sare iyo da'da halis sare u yihiin ilmaha yaryar, waxaan qaatay hall magaalada xukuumadda in ay soo saarto," ayuu yiri Helda u sheegay suxufiyiinta in Pekanbaru, Sari Indriati. Qaxidda goobaha ciiryaamada loo arko muhiim by Azisman Saad, khabiiro sambabada in Pekanbaru. Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay isaga, markuu geeddiga lagu sameeyo in ay isku gobolka yihiin, ma noqon doonto wax ku ool ah. "Haddii geeddiga ee Pekanbaru sidoo kale, waxaan u malaynayaa in yar wax ku ool ah. Sababtoo ah Pekanbaru la gudubyadaas ciiryaamada, "ayuu yiri Azisman. Yaa 'actor' ka dambeeyay gubidda kaymaha iyo dhulkayaguba? Koox kasta hawlo xaadhista dhulka heli doonaa boqolkiiba ay dakhli u gaar ah. Waxaa jira qiyaastii 20 jilayaasha lug duurka oo ay helaan faa'iidooyin dhaqaale ka dababka kaynta iyo dhulka. Inta badan unugyada oo xiiso leh iyo faa'iido ka hawlwadeenada dhaqaalaha waa ay adag tahay in la qaado tallaabo sharci fulinta. Dowladda Calamooyin tallaabo ama oogo shakhsiyaadka iyo shirkadaha looga shakiyay gubanaya dalkii aan ku filnaan doonto in ay ka hortagaan ciiryaamada soo noqnoqota. Xaqiiqada iyo gunaanad ka muujiyay in cilmi-baarista ku saabsan 'The Economy Siyaasadda ee Land iyo Forest Naarta' ah cilmi baare Center for International Dhirta Research (CIFOR) Herry Purnomo. Adayga duurka, sida ay Herrera, ka dhacaan sababtoo ah gubidda kaynta soo maleegay, bulshada iyo fasalada dhexe iyo shirkadda had iyo jeer waa la xiriiri dadka awood leh, labada ugu degmada, qaranka, iyo xataa ilaa heerka ASEAN. Daraasad Herry Purnomo ogaaday in aad qiimihii dhulka qaar ayaa ka bariyeelay gubanaayo u kici doonaa sida diyaar u beerto saliid oo timir ah. "Ma ahan wax fudud in taliyayaashii oo ku weyddiinayaa (qoryo gubanaya), waxa laga yaabaa in uu leeyahay (beer) saliid oo timir ah, dababka kaynta, la xiriira xisbiga gaar ah waa xoog badan yahay ee degaanka, si Ninkaas ama taliyihii ma fududa aad (jilitaanka), waa in uu arko koox siyaasadeed "Herry on BBC Indonesia, ayaa Arbacadii (23/9). Jilayaasha Kuwaas, oo ku salaysan uu cilmi baaris, ka shaqeeyaan sidii nooc ka mid ah "dambiyada abaabulan". Waxaa jira kooxo in lagu fuliyo hawlaha kala duwan, sida sheegashada dhulka, abaabulo beeralayda aan gawraco ama goynta ama gubasho, ilaa kooxda suuq ah oo ku lugta leh saraakiisha tuulada. Laakiin ma aha oo kaliya ee heer dhexe, mulkiilaha waxaa laga yaabaa qaraabada ka mid ah tuulooyinka, shaqaalaha shirkadda ee, shaqaalaha degmada, nin ganacsade ah, ama ka maal-heerkiisu dhex-dhexaad ka Jakarta, AHN, ama Surabaya. Abaabulan Koox kasta hawlo xaadhista dal keliya heli doonaa boqolkiiba dakhliga, laakiin celcelis ahaan, guddiga kooxaha beeralay helay qaybta ugu weyn ee dakhliga, inta u dhaxaysa 51% -57%, halka kooxaha ka mid ah beeralayda gawraco, jarida, iyo gubashadii helo qayb ka mid ah dakhliga u dhexeeya 2 % -14%. In uu cilmi-baarista, Herry ogaaday in aad qiimihii dhulka qaar ayaa ka bariyeelay by xaadhista ee beeraha ku bixiyeen qiimo ah RP 8.6 million halkii hektar. Si kastaba ha ahaatee, dhulka ee 'diyaar u beerto' ama la gubay halkii kordhin doonaa qiimihiisa, kuwaas oo Rp11.2 million halkii hektar. Kolkaasaan saddex sano ka dib, ka dib markii uu dalka ka ayaa lagu beeray diyaar u goosashada, beeralaydu hore u yihiin sidaas darteed waa la iibin karaa qiimo ah Rp40 million halkii hektar. Image MUUQAALADA copyrightGETTY Caption Image Gubashadii dadka dhulka leh ayaa laga yaabaa inuu ka mid ah magaalooyinka waaweyn ama qaraabada dadka tuulada, shaqaalaha degmada, si ay cilmi. Kororka qiimaha dhaqaale ee dalka waxaa ka waxa ay ka dhigeysaa jilayaasha kuwaas oo doonay inay ka faa'iideystaan ​​dab dhulka iyo kaynta si joogto ah dhacaan. Intaa waxaa dheer, astaamaha iibsashada iyo iibinta dhulka, dhul diyaarinta waxaa u xilsaaran wax iibsadaa, haddii lagu gubi doonaa, ama la nadiifiyo mashiin. Qiimaha jaban ee lagu nadiifiyo, iibsada nasiib noqon doonto weyn. Wixii la barbardhigo, sida ay Herrera, halkii hektar kharashka la gubo $ 10-20, halka dalkii la nadiifin mashiin u baahan yahay $ 200 halkii hektar. Herry daraasadda lagu sameeyay 11 goobood oo ka tirsan afar degmo oo ku Riau, kuwaas oo Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai iyo Bengkalis la isticmaalayo habab khariidaynta, sahan, iyo siyaasadda. In Riau, waxaa jira 60 beeraha saliid oo timir ah iyo beeraha geed warshadaha 26. Dhaaquut Siyaasadda Shirkadaha ama shaqsiyaad ka jira aagga oo noqday milkiilaha beeraha saliid oo timir ah ee deegaanka ka heli kartaa Dhaaquut siyaasadeed ee heer degaan. Herrera tilmaamay, "Ka soo qaad ay jiraan shirkado yar-yar in ay leeyihiin xisbiyada aad u xoog badan sokoeye iyo siyaasadeed ee degmada ee saameeya geedi socodkii go'aan qaadashada iyo fulinta ee degaanka. Waxaa laga yaabaa in ay yihiin taageerayaasha xoogan oo korkanaga ah." Ciyaartoyda heerka dhexe ama 'lid', Herrera helay, waxay noqon kartaa qof. "Laga soo bilaabo saraakiisha dowladda shaqsi, booliska, ciidamada, cilmi, laga yaabaa inuu qeyb, waxay yeelan karaan ilaa boqolaal hektar oo timir ah iyo timir ah in geeddi-socodka horumarinta (sameeyo) kartaa gubasho ku soo dhaweeyeen xilli roobeedka ku xiga," ayuu yiri. Jilayaasha tani waa akhriyi karin ama qabto qaab sharci fulinta hadda dhacaya in la ciiryaamada qaban. Si aad u heli, waxaa muhiim ah in ay raadiso meesha alaabta oo saliid ah oo timir ka xoqayaa waa marsiin. Dhulka Shiidaalka Against natiijooyinkan, oo ah afhayeenka Ururka Indonesian Palm Oil Association (GAPKI), Tofan Mahdi, ayaa sheegay in ay jiraan 2,500 oo shirkadood oo saliid ah oo timir ah fasalka yaryar iyo kuwa dhexe, iyo in guud ahaan waxaa jira shirkado 635 oo kaliya in xubno ka yihiin GAPKI. Ciiro in Riau ayaa socday muddo 18-sano ee lasoo dhaafay. "Taasi si xubnaha ka hubi in jirin (gubanaya ee dhulka) anigu waxaan ahay, maxaa yeelay, waxaannu kor iyo hoos loo xakameeyo. Xubnaha ka baxsan GAPKI, ma waxaan ku jiray alaabta ama danaha, laakiin waxaan ku dhiirri, waxa lagu soo bandhigay oo ah taliyaha South Kalimantan tusaale ahaan taageeraan, si ay (shirkadaha saliidda saliidda yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah) si GAPKI si xubin ka tahay in la xakameeyo si fudud ah, "ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, Tofan galiyo si ayan lahaa ayaa hab adag ee isha si ay ugu hooseysa. "Laakiin GAPKI leeyihiin heerarka, waxay leeyihiin shuruudo, u hoggaansamaan xeerarka la raacayo xeerarka ee dhexe, deegaanka iyo gobollada," ayuu yiri. Intaa waxaa dheer, Police Riau ayaa aasaasay PT Inti Langgam Beelaha sidoo kale xubin ka GAPKI ah sida looga shakisan yahay dabka kaynta. Dadaalka fulinta sharciga kuwaas oo ilaa hadda aan lagu soo taabtay Dhaaquut siyaasadeed oo la ilaaliyo shirkadda ama milkiilaha dhulka gubay. Edi Saputra, beeralayda Ogan Ogan Ilir, South Sumatra ayaa sheegay in dhaqanka ee gubanaya dalkii hore u socda ee bulshada boqolaal sannadood. Laakiin dhaqanka looma fuliyo sanad walba, sida caadiga ah oo kaliya 5-10 sano inay ku beeganto xilli beerto. "Waxaan heysanaa boqolaal sano si ay u gubaan, laakiin maxaad aan hadda yahay addunyada ku saabsan qiiqa, waxay ka dhigan tahay, sababta waxa ay u muuqataa in ay dab xoog badan ah? Maxaa yeelay, dhammaan heshiisyada ay ku siiyey shirkad ah, si dalka waxaa si ololi kara. Shirkadaha Land in uu fuuq, aan la beeray karo bariis . Hadda ka badan ka hor, Fog, haddii xoqo, waxaa jira dhibco dab ah, si toos ah gubanaya dalkii, "ayuu yiri. Dababka kaynta xayiraadda: Waa maxay sababta shirkadaha waaweyn Ha taaban? 23 September 2015 Inta badan shirkadaha kaynta gubata oo la dacweeyay, laakiin habka waa cadaw ah U dhaqdhaqaaqa deegaanka ee Riau mahad cunaqabatayn in shirkadaha la xiriira dabka dhulka iyo kaynta ku Sumatra, laakiin waxa ay su'aal ka sababta tiro ka mid ah shirkadaha waaweeyn oo ha taaban ". Isbahaysiga kormeera nabaad in Riau sheegay, dowladda ayaa sidoo kale ku siin kara xayiraada camiridda in la keeno kiiska maxkamadda iyo u baahan tahay shirkadaha in ay bixiyaan mag-in dadka ay saameeyeen ciiro ah. "Siinta cunaqabateyn ay ahaayeen tallaabo dhaqso, arrin rajo leh. Laakiin, waxaan arki doonaa bal in talaabooyinka la mid ah waxaa lagu fulin doonaa shirkadaha waaweyn in la ogaan karaa oo diiwaan dabka iyo dabka khibrad sanad walba ee aagga ay ka-dhimista," ayuu yiri isbahaysiga dhaq-kormeera burburinta Forest (Indhaha on kaynta) gobolkii Riau, Afdhal Mahyuddin, u sheegay BBC Indonesia, Heyder Affan, ayaa Arbacadii (09/23) subaxdii. Horaantii afar shirkadood ee Sumatra, xayirayo by Wasaaradda Degaanka iyo kaymaha (KLHK) ee la xiriira dabka dhulka iyo kaynta. Shirkadaha oo ruqsadaha ay ganaax ku PT LIH (Riau), PT TPR (South Sumatra) iyo PT WAJ (South Sumatra), halka PT HSL (Riau) liisanka waxaa buriyay. Shirkadaha waa inay bixiyaan qalabka ka hortagga dabka Shirkadaha waa in ay ka tanaazulaan dhamaan duurka iyo baxo waajibaadkiisa, sida ka hortagga dabka qalabka dhamaystiro. Xayiraad Tani waxay ku salaysan waxaa lagu dhacdo news hawleed gaar ah (Satgasus) Wasaaradda Degaanka iyo Dhirta. Waxay hadda soo booqatay 286 goobo ku gubay Sumatra iyo Kalimantan. Magdhow Pay Afdhal dheeraad ah Mahyuddin sheegay inuusan aad u la yaabay in ay bartaan in ay xukuumaddu ku xayiray LIH PT fasax ah. "Sababtoo ah, la tuhunsan yahay in 2013 oo markaas, waxay noqdeen oo ilaa haatan qudhiisu," ayuu yiri Afdal. Sidoo kale, Afdal ma ahaa mid aad u la yaabay markii dowladda burin liisanka ganacsiga ee PT HSL ee Riau. "Dabcan, sida muddo dheer aan firfircoonayn," ayuu hadalkiisa raaciyay. Si kastaba ha ahaatee, ayuu hadalkiisa ku daray, in xukuumaddu ay awoodaan in ay bixiyaan cunaqabatayn la mid ah, ama camiridda, dhanka ah shirkado kale oo waaweyn oo muddo sanado ah sameeyo xadgudubyada la mid ah waa in. "Waxaan la soco, waxaa jira dhowr heshiisyada shirkadaha tilmaamay in xadgudubyada. Waxa la yaab leh, ay ma burin ama lagu soo rogo," ayuu yiri Afdal. Dhaq-fiirsan, shirkado badan oo waaweyn in mari kaynta hawadda "Waxaan qabaa inay u baahan talaabo ka shirkadood oo baaxad weyn ama profile sare," ayuu hadalkiisa raaciyay. Waxa uu sidoo kale soo jeediyay, rigoore waa in ay ahaataa in ka badan kaliya laalis ama kala noqosho liisan hawlgalka ay, sida dacwada ee maxkamada dambiyada ama rayidka ah. "Waxay sidoo kale u leeyihiin in ay Mag la siiyo bulshada ay dhibaatadu saameysey si weyn ay sabab u tahay ciiryaamada ah," ayuu yiri. Currently, kooxda ayaa booqday 286 goobood oo KLHK gubay Sumatra iyo Kalimantan. Dheeraad ah, ayuu yiri, KLHK ayaa sheegay in shirkadooda oo ganaax ku liisanka buuxi doona kaabayaasha wali waa in la fuliyo si hoos loogu dhigo suurtagalka dabka. Keydsho oo saamayn ku yeelan noqosho liisan haddii shirkadda waxaa heshay dambi maxkamad, ayaa sheegay in KLHK. La wadaag wararka ku saabsan b "Waa maxay xukuumadda sugaya caruurteena dhiman sabab u tahay sigaar?" In qolka ku qalabeysan yahay jaangooyaha hawada dabaqa saddexaad ee City Hall Pekanbaru, Apriyani eegaya ilmo afar bilood jir ah, soo jabiyey seexday. Naagtii waxay 35-sano jir ah ayaa ka mid ah afar hooyooyinka oo qaxooti ku ah daryeelka carruurta yaryar oo degdeg ah siiyaa Pekanbaru dowladda magaalada. Tani waa dadaal loogu jiro in la ilaaliyo ilmaha ka qiiqa sunta ah iyadoo ay sabab u ah dalka iyo kaynta dababka in ayaa socday muddo bilooyin ah. "Halkan, ilmahayga free of qiiqa. Duwan guriga," ayuu yiri Apriyani. "Marka aan joogo guriga, ilmahayga waxaa qufac joogto ah. Haddii halkan, xafiiska xiran yahay, waxaana jira daahiriya hawada. Biirawga hawada ee Pekanbaru duubay 1000 xisaabin Pollutant Standard Index (PSI). In kastoo 100 PSI oo keliya lagu tilmaamay inay tahay caafimaad qabin, oo haddii in ka badan 300 oo waxaa loo arkaa khatar ah. "Dhallaanka ugu xanuunsadaan. Ilmaha oo kalena waxa lagu joogto ah qufaca" Waxaa jira ilmaha ma sariiraha waxaa lagu kireeyaa, iyo dhululubada oxygen, laakiin Afriyani mengaakan isaga ma uusan dooneynin inaan halkaas joogo waqti dheer. "Waxaan jeclaan lahaa dowladda in ay ka shaqeeyaan adag tahay in la baabi'iyo qiiq, si carruurtu aysan samayn dhibaato neefsashada ah mar kasta. Sababta oo ah waxa ugu xun caafimaadkooda, sax? Dr. Helda Suryani, oo madax ka ah waaxda caafimaadka ee Pekanbaru ayaa sheegay in uu hoy u ahaa hayaa gaar ahaan qoysaska saboolka ah kuwaas oo u nugul yihiin. "Taajir leeyihiin hawada u gaar ah, oo naftooda ka heli kartaa meel ammaan ah. Iyada oo ay tani meel kuwa guryaha maalin kasta ka buuxaan qiiqa waxyeello aan ku aragno. Markii la weydiiyay sababta ay sidaas u dheer ka dib markii dawladda cusub la siiyay Hooy, wryly wuu qoslay. "Waa maxay sababta aad u dheer? Waxaan ku tukanayeen roobka, iyo markii ciidanka u yimid in ay caawiyaan, hawada ka nadiifsan muddo laba maalmood ah. Laakiin hadda halkan mar kale. Oo saasay wada noqon lahaa weligiis sidaan oo kale ah." Sida Desi, hoy waa goor danbe. Tani waxay hooyada da'da yar fadhiya iyada iyo hal sano jir Hospital ee Santa Maria. Waxa uu helay xanuun ka haya sambabada. "Waxaan ilmahayga gudaha mar walba sii. Waxaan uusan meelna sababta oo ah qiiqa, laakiin wiilkii aan weli xiriir la oof-wareen." "Waa maxay sababta ay dawladdu ma sameeyo wax?" ayuu is weydiiyay "Ma sugi dowladda carruurtayada dhiman sabab u tahay sigaar?" (BBC)